Mpanamboatra sy mpamatsy fonosana fibre | China Fiber Optical Enclosure Factory
Topimaso Ity boaty fizarana fomba 86 ity dia ampiharina amin'ny tamba-jotra FTTX hampifandray ireo tariby mitete sy ireo fitaovana ONU amin'ny alàlan'ny seranan-tsambo. Izy io dia manohana ny fampisarahana, ny fizarana, ny fifandraisana mekanika ary ny fametrahana ny rindrina. Ny fahaizan'ity boaty ity dia mety ho 2cores. Endri-javatra ● Ny fitaovana ABS ampiasaina dia miantoka ny vatana matanjaka sy maivana ● Fametrahana mora: Mipetaka amin'ny rindrina ● Fiasa mora: fibre plug tsy mila manokatra akorandriaka ● Fidirana tariby fibre avy amin'ny lafiny rehetra, manohana ny fantsom-pifandraisana ...
OTC-S Fibre optique optika
Fampiharana sy ny endri-javatra ● Azo ampiasaina amin'ny fampiharana mivantana sy sampana ho an'ny tariby fibre bundy sy fibre ribbon; ● Mety amin'ny fampiharana aerial na rindrina; ● Avereno ny fahafaha-misokatra misokatra; ● Fantsam-pandrefesana optika Slide-N-Lock miaraka amin'ny zoro fisokafany ambonin'ny 90 ° C; ● Azo ampitomboina sy hihena ny fitoeram-bokatra arakaraka ny fampiharana; ● Ny ampahany plastika dia vita amin'ny plastika enti-miasa PC avo lenta, izay miantoka fampisehoana tonga lafatra amin'ny fanoherana sy ny tanjaka; ● Mpampisehoana tonga lafatra ...
Fampidirana Optical OTC-O
Ny tranon'ny OTC-O dia boribory ary noforonina ho toy ny rafitra mijoro, izay namboarina sy nasiana tombo-kase tamin'ny hoop manokana ary miasa mora. Misy seranan-tsambo fidirana / fivoahana efatra. Nasiana tombo-kase ny seranan-tsambo. Aorian'ny nametrahana ilay tariby tamin'ny seranan-tsambo dia arotsaho ny satroka sikotra, avy eo hasiana tombo-kase ny seranana. OTC-O dia mety amin'ny fiarovana ny karazana tariby, ny sakany amin'ny fampiharana dia misy ny habakabaka, ambanin'ny tany ary ny fantsona. Ny OTC-O dia vita amin'ny plastika enjeniera PC avo lenta, w ...
Fanamafisana fibre optika marindrano (FOSC) OTC-M
1. Sehatra fampiharana Ity boky torolàlana momba ny fametrahana ity dia mety amin'ny Fiber Optic Splice Closure (aorian'izay nohafohezina hoe FOSC), ho torolàlana amin'ny fametrahana tsara. Ny haben'ny fampiharana dia: aerial and wall-mounting. Ny mari-pana manodidina dia -40 ka hatramin'ny 65. 2. Struktur sy fanamboarana fototra 2.1 Dimension sy capacité Dimension ivelany (LxWxH) 280x200x90 (mm) Lanja (tsy tafiditra ao anaty boaty ivelany) 1200g-1500g Isan'ny seranan-tsambo fidirana / fivoahana max. 4 faramita savaivon'ny tariby fibre Φ8 —Φ14 ...
Fampidirana Optical OTC-J
Fampiharana sy ny endri-javatra ● Azo ampiasaina amin'ny fampiharana mivantana sy sampana ho an'ny tariby fibre bundy sy fibre ribbon; ● Mety amin'ny fampiharana aerial, duct, na nalevina; ● Avereno ny fahafaha-misokatra misokatra Slide-N-Lock fibre optika splice miaraka amin'ny zoro fisokafany ambonin'ny 90 ° C; ● Azo ampitomboina sy hihena ny fitoeram-bokatra arakaraka ny fampiharana; ● Ny ampahany plastika dia vita amin'ny plastika enti-miasa PC avo lenta, izay miantoka fampisehoana tonga lafatra amin'ny fanoherana sy ny tanjaka; ● Fampisehoana tonga lafatra amin'ny ...
OTC-F Fibre optika fibre
Ny tranon'ny OTC-F dia boribory ary noforonina ho toy ny rafitra mijoro, izay namboarina sy nasiana tombo-kase tamin'ny hoop manokana ary niasa mora. Misy seranan-tsambo fidirana / fivoahana enina. Ny seranana dia voaisy tombo-kase tamin'ny tanany miaro hafanana mihena. Taorian'ny nametrahana ilay tariby tamin'ny seranana dia nafana ny tanany, avy eo hasiana tombo-kase ny seranana ary namboarina ny telegrama. OTC-F dia mety amin'ny fiarovana ny karazana tariby, ny sakany amin'ny fampiharana dia misy aerial, underground ary pipeline. Ny OTC-F dia ma ...
Fampidirana Optical OTC-E
OTC-Fampidirana Optical Fibre
Ny boaty misy ny fibre IP65 16ports FTTH ivelany dia azo ampiasaina amin'ny fizarana sy ny fifandraisana amin'ny terminal misy karazana rafitra fibre optique, indrindra mety amin'ny fizarana terminal-tambajotra mini, izay misy ny tariby optika, cores patch na pigtails mifandray. Endri-javatra: karazana tsy voaisy tombo-kase, raikitra amin'ny bolt. Seranana tariby roa ho an'ny fifandraisana tariby anaty trano mora ampiasaina, manana fahaizana avo lenta amin'ny pigtails ambim-bava Afaka mifandray / mifandray amin'ny adaptatera mihoatra ny 200 heny Connector ho an'ny ...